Raha tia be Metro tanàna, indrindra fa ny avy amin'ny iraisam-pirenena toerana dia ho tia Hong Kong Tower slot lalao miorina amin'ny avo indrindra telo tilikambo tany manontolo ny Shina. izany 5 miraingiraingy azon'ny finday slots lalao ho ambony ny resahana ny tsara tarehy jerena ny tanàna ambanin'ny tilikambo avo indrindra. Ny loko manga avokoa ny alina mahatahotra fahazavana izay mameno ny foto-kevitra. Ny feon'ny rivotra sy ny hetsika ny sahirana fifamoivoizana eto ambany amin'ny polisy matetika feon'ny anjombona tsapanao ianao nitsangana teo an-tampon'ny tilikambo ireo. Ny lalao dia nitendry lokanga tamin'ny Bet habetsaky ny £ 0,20 sy ny ambony indrindra isan-kofehy ireny izay fiakarana no any £ 100.
Momba ny developer ny Hong Kong Tower:
Ny developer ity finday slots lalao dia Elk lalao, zava-baovao Casino mpitarika ao amin'ny orinasa izay niteraka maro famoronana lalao ho an'ny mpampiasa aterineto. Ny lalao rehetra dia malaza, ary nilalao tamin'ny toerana maro Casino sy ny finday fampiharana ny mpampiasa manerana izao tontolo izao.
Ny fanehoana an'ohatra io lalao finday slots ahitana ny volamena 7, manga diamondra, ny lota voninkazo sy ny hazo izay miforona bonsai sarobidy ambony fototra fanehoana an'ohatra ny slot. Number 7 volamena dia mandoa avo indrindra amin'ny 1500 Fantsiho amin'ny hazo fijaliana fotoana 5 famantarana landings amin'ny payline. Misy dimy kisendrasendra maro loko Sinoa marika izay vidiny ambany ireo. Ny lalao famantarana miaraka amin'ny manga & mena Yin-yangs hisolo tena ny tombony fanehoana an'ohatra ny lalao.
Mystery Feature Symbol: Ary rehefa telo ny lalao Logo marika hita ao amin'ny stacked fananganana mba handrakotra ny miraingiraingy azon'ny, dia tena mameno ny manambara mariky hafa. Mety hita ho manga Yin-Yang ary rehefa mitranga izany, mahazo milalao miaraka amin'ny ambaratonga tombony 2 fanampiny fiainany for jackpot fahafahana mandresy.
Bonus Game Entry: Ny mena Yin-Yang dia aelezo mariky sy telo na mihoatra ny fipetrahana mahatonga ny tombony lalao. Efa-landings manome tombony anao lalao teny amin'ny fanampiny fiainana sy dimy landings amin'ny 2 fanampiny fiainany hilalao ny jackpot fihodinana.
Wheels amin'ny lanitra: Izany no jackpot lalao ity finday slots lalao izay mahazo ny mihodina ny kodiarana goavam-be miaraka amin'ny isa ny tsatòka voalaza eo amboniny. Misy ambaratonga telo eto; ny ambaratonga voalohany manome anao ho Max fandresena ny 2000 ny tsato-kazo fotoana arahin'ny 10,000 fotoana ny tsato-kazo eo amin'ny ambaratonga faharoa sy ambaratonga fahatelo sady farany dia manolotra fahafahana handresy ny whopping 50,000 fotoana ny tsatòka.
izany finday slots lalao manome ny ambony indrindra ny fandresena tsatòka maro miaraka amin'ny lafin-javatra maro tombony dia afaka mandray soa avy. Afaka manantena ny hahazo antoka fa ny sasany vola be raha milalao spins vitsy izany slot.
Theater ny Night